Kedu usoro iji hazie igbe onyinye gị
Mpempe akwụkwọ njirimara onwe ya na-abụkarị ebe a na-ahụkarị taa, site na nnukwu ụlọ ọrụ na obere azụmaahịa, ha niile chọrọ iwulite aha ụlọ ọrụ nke aka ha site na nkwakọ ngwaahịa ya. Dịka nkwakọ ngwaahịa bụ ụzọ kachasị mfe, dị ọnụ ala ma na-agbasa iji nweta ebumnuche ahụ. Taa, dị ka afọ 10 ahụmahụ akwụkwọ p ...
Ọ bụrụ na nkwakọ ngwaahịa gị nwere ike ibibi ndụ ma ọ bụ omume enyi
Egwuregwu dị mma na gburugburu ugbu a na-abụ ihe na-ewu ewu, ọtụtụ mmadụ na-eche banyere ya kwa ụbọchị, ebe anyị na-eche ihu na-ebute ọdachi ndị na-emebi mbibi nke okike site n'aka anyị. Maka anyị, dịka onye na-emepụta igbe nkwakọ ngwaahịa, a na-ajụkarị ya, ọ bụrụ na igbe gị ga-emebi emebi? Nke mbụ, ka anyị chọpụta ihe bụ biodegrada ...
Nkwakọ ngwaahịa dị ka ihe nchebe maka ngwaahịa dị n'ime, agbanyeghị, na mmepe nke akụ na ụba ụwa, nkwakọ ngwaahịa ga-agbakwunye uru ọzọ. Iguzo puta na ahia ndi ahia taa, ikwesiri iru “wow wow”, nke n’eme ka ihe nkwakọba ihe na nke kacha mkpa. Mana otu esi echepụta ...